एभिन्युज टेलिभिजनपुराना कम्युनिष्ट नेताहरुलाई पार्टी एकतामा आउन अध्यक्ष दाहालको आग्रह - एभिन्युज टेलिभिजन
पुराना कम्युनिष्ट नेताहरुलाई पार्टी एकतामा आउन अध्यक्ष दाहालको आग्रह
7 Shrawan 2075 Monday 12:44 pm प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीमा सहभागी हुन पुराना कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई आहृवान गरेका छन् । विश्वमै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने अवसर गुम्न नदिन बाँकी रहेका सबै पुराना कम्युनिष्ट नेताहरुलाई पार्टी एकतामा आउन उनले आग्रह गरेका हुन् ।
उनले भने, “गोविन्द केसीको अनशनमा हामी सबैले मिलेर जानुपर्छ भनेका छौं । उहाँको जीवनरक्षाको लागि हामीले तीन जना डाक्टरको सल्लाहअनुसार जुम्लाबाट ल्याएका हौं । हामीले वार्ता टोली बनाइसकेका छौं । तर, यहाँ के भइरहेको छ भने, उहाँसँग वार्ता गर्न पनि नदिने, समस्याको समाधान गर्न पनि नदिने । सरकारी डाक्टरहरुलाई बिरामी चेक गर्न पनि नदिने काम भइरहेको छ । वार्तामा त लेनदेन हुन्छ, तर लेनदेन गर्न पनि गर्न नदिने । एउटै कुरा अध्यादेश जस्ताको तस्तै ल्याए मात्र मान्छौं भन्ने छ ।”
उनले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या रहेको भन्दै सबै समस्याहरुलाई हल गर्न उच्च शिक्षा आयोग बनाउन सरकार तयार रहेको पनि बताए । उनले संविधान सबैले मान्नुपर्नेमा जोड दिए । “संविधान सबैले मान्नुपर्छ, केही तत्वहरुले अराजकता निम्त्याउन खोजिरहेका छन् । एकाध मान्छेले जे भन्यो, त्यही गर्ने हो भने किन चाहियो संविधान ? किन चाहियो स्थानीय तह ? त्यसको विरुद्ध जानु नियमसंगत होइन ।”